Dalxiisayaasha aan lahayn toogashada xoojisa waxay Israa'iil ku geli karaan koox ahaan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Israa’iil Wararka Jebinaya » Dalxiisayaasha aan lahayn toogashada xoojisa waxay Israa'iil ku geli karaan koox ahaan
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dalxiisayaasha aan lahayn toogashada xoojisa waxay Israa'iil ku geli karaan koox ahaan.
Dib u furista xuduudaha Israa'iil ayaa loo arkaa inay tahay tallaabo muhiim ah oo lagu soo celinayo warshadaha dalxiiska ee Israa'iil, kaas oo uu burburiyay masiibada COVID-19 iyo xayiraadaha la socda.
Dalxiisayaasha caalamiga ah ee aan haysan tallaalka xoojinta waxay awoodi doonaan inay galaan Israa'iil.
Dalxiisayaasha aan lahayn tallaalka saddexaad ee COVID-19 ayaa looga baahan doonaa inay qayb ka noqdaan kooxda dalxiiska.
Shuruudaha cusub ee dalxiiska ajnabiga ah ee Israel ayaa dhaqan galaya berri, Noofambar 9, 2021.
Dowladda Israel ayaa maanta ku dhawaaqday in dalxiisayaasha ajnabiga ah ee aan lahayn toogashada ka dhanka ah COVID-19 wali loo ogolaan doono inay galaan Israel, laakiin kaliya qayb ka mid ah kooxaha dalxiiska ee habaysan.
Soo-booqdayaasha ajnabiga ah ee aan haysan tallaalka xoojinta waxay awoodi doonaan inay galaan Israa'iil Haddii in ka badan lix bilood ay ka soo wareegtay markii ay heleen tallaalka labaad, wasaaradaha caafimaadka iyo dalxiiska ee Israa'iil ayaa bayaan wadajir ah ku sheegay.
Booqdayaashaas waxaa lagu xiri doonaa shuruudo dhowr ah, wasaaraddu waxay tiri.
Kooxda dalxiiska waa in ay fasax ka siiso wasaaradda dalxiiska si ay u soo galaan Israa'iil, iyo xubnaheeda - shan ilaa 40 qof - waa in ay ka yimaadaan wadamada xaalad wanaagsan oo cudur faafa ah oo lagu tallaalo tallaalada ay aqoonsan yihiin Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO).
Shuruudaha cusub ayaa dhaqan galaya laga bilaabo berri.
Israa'iil Waxay u furtay xuduudaheeda laga bilaabo Noofambar 1 dalxiisayaal gaar ah oo lagu tallaalay tallaallada ay aqoonsan tahay WHO - kuwa ay bixiso Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac iyo Sinopharm - waxaa loo qoondeeyay inaysan u safrin dalal loo aqoonsaday inay yihiin "casaan" 14-kii maalmood ee la soo dhaafay.
Laga bilaabo Noofambar 15, dalxiisayaasha, oo lagu tallaalay Sputnik V tallaalka Ruushku sameeyay, ayaa la filayaa in loo oggolaado inay galaan Israa'iil. Waa inay sameeyaan baaritaanka serology, kaasoo lagu ogaanayo unugyada difaaca jirka.
Wasiirka caafimaadka Nitzan Horowitz ayaa sheegay maanta in "sidoo kale marka la eego dalxiiska, waxaan u baahanahay inaan barano inaan ka garab noolaano coronavirus."
Wasiirka dalxiiska Yoel Razvozov ayaa yiri, "Waddada dib u soo laabashada dalxiisayaashu weli way dheer tahay, markaa waa inaan si degdeg ah oo sax ah u dhaqanaa si aan u kordhinno tirada dalxiisayaasha imanaya Israel."